‘Vanhu regai kuvarairwa’ | Kwayedza
‘Vanhu regai kuvarairwa’
10 Jun, 2021 - 16:06 2021-06-10T16:33:04+00:00 2021-06-10T16:32:47+00:00 0 Views
MUIMBI wemusambo weChimurenga — Norest “Mambo Chingaira Makoni” Magede — anokurudzira veruzhinji kuti vasavarairwe vachifunga kuti Covid-19 hakuchisina, asi kuti varambe vachitevedzera matanho ose akatarwa neHurumende pamwechete nesangano reWorld Health Organisation (WHO) ekudzivirira denda iri.
Mambo Chingaira Makoni —uyo anove mwana wemukoma wemushakabvu, Cde Dickson “Chinx” Chingaira — anoti zvakakosha kuti veruzhinji vazvidzivirire kubva kuchirwere ichi kuburikidza zvakare nekubaiwa majekiseni.
“Isu tose sezvizvarwa zvemuZimbabwe tine basa guru rekubata mukuona kuti tarwisa Covid-19 kusvika yapera. Kuti zvikwanisike kuitika, tinofanirwa kuramba tichitevedzera mitemo yose iripo yekurwisa denda reCovid-19 kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichinyuka.
“Izvezvi kune chirongwa chekubaiwa majekiseni ekudzivirira Covid-19, ngatiite mudungwe kuenda kunobaiwa tizvidzivirire tisape chirwere ichi mukana wekuramba chichinyuka, tichirwise chipere zvachose,” anodaro.
Mambo Chingaira Makoni anoti vanhu vane mukurumbira vanoita mabasa akasiyana — vangave vaimbi, vemadhirama kana vanamuzvinabhizimisi — vanofanirwa kutungamira panyaya yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 sezvo zvichibatsira mukukurudzira veruzhinji kuti vetevere mumatsimba avo.
“Isu sevaimbi tiri kufanira kutora chikamu chikuru mukushambadza nekukurudzira veruzhinji kuti vaende kunobaiwa majekiseni ekudzivirira Covid-19.
“Veruzhinji vanotevera zvikuru zvatinoita saka naizvozvo tikaonekwa tichinobaiwa, vanoteverawo. Saka handei nehuwandu hwedu tirwise chirwere ichi,” anodaro.